ငွေကိုင် Jobs in Myanmar
ငွေကိုင် အလုပ် 34 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ထိပ်တန်း ငွေကိုင် အလုပ်အကိုင်များ။ Alote.com.mm တွင် နောက်ဆုံး လစ်လပ်နေရာများအတွက် အလုပ်ရှင်များထံ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားပါ။
ငွေကိုင် | Cashier
- စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း နှင့်ပက်သက်သည့် အတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည် - ပညာအရည်အချင်း အနိမ့်ဆုံး အထက်တန်းရှိရမည်။
- ဘွဲရ - ကွန်ပျူတာအခြေခံ - အသက် (19-25)နှစ်ကြား
ငွေကိုင် ( Shop Cashier )
Supermarket ငွေရှင်းကောင်တာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်
- ငွေကြေးဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများကို တိကျသေချာစွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ - Stock အဝင်အထွက် စာရင်းများအား တိကျစွာဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ - ပစ္စည်းစာရင်း Data များ၊ Shopping Bag များ၊ Catalogue စာရင်းများ၊ Transfer ရွှေ့ခြင်း၊ Customer Record မှတ်ခြင်း၊ နေ့စဉ်အရောင်း Data များ ဖြည့်စွက်ခြင်း စသော စာရင်းနှင့်ပတ်သက်သည်များကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ - Customer Relationship ကောင်းမွန်စေရန် ၎င်းတို့ Order တက်သော၊ လိုချင်သော ဒီဇိုင်းများအား မြန်မြန်နှင့် တိတိကျကျရစေရန် စီစဉ်ပေးရခြင်း။ -Customer များအား အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: -အလုပ်ချိန်(၂) ဆိုင်းရှိသည်။
- Cash book အဝင်အထွက်ရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ငွေရေးကြေးရေးနှင့်ပက်သက်ပြီး တာဝန်ယူနိုင်ရမည်။ - အသက် (၂၀-၃၅)နှစ်ထက်မကျော်ရ။ - Cashier လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။
Bank အဝင်အထွက် စာရင်းသွင်းရမည်။ Cash Book Data Entry သွင်းရမည်။ Petty Cash (အသေးစားစာရင်းကိုင်ရမည်။) Sales Price ထည့်ပေးရမည်။ I-stock Software သုံးတက်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: အချိန်မှန်ကြေး၊ ရက်မှန်ကြေး ယူနီဖောင်း
- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိသူ။ - Accountant Software အသုံးပြု ဖူးသူ ဦးစားပေးပါမည်။ (အတွေ့အကြုံ မရှိသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်)
Pyi Taw Phyo Thitsar Co.,Ltd
- Daily Cash Book/Data Entry ကို ကိုင်တွယ်နိုင်ရမည် - Daily Revenue & Expense List ကို ကိုင်တွယ်နိုင်ရမည် - Stock In-Out List ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။
- Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Pagemaker,.etc စသည့် office application များကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Classify Accounting Heading ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ - Cash Receipt & Payment ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ - Cash Book Posting ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။
- တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ - စာရင်းဇယားကို တိတိကျကျလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
- ရိုးသားကြိုးစား၍လုပ်ငန်းနှင့်ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်။ - Computer ဖြင့် Code Numbers ကိုတိကျမှန်ကန်စွာ စာရင်းသွင်းနိုင်ရမည်။ - အရောင်းပြေစာဖွင့်ခြင်း၊ ငွေလက်ခံခြင်းများအား တိကျမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Customer များအပေါ်တွင်ဖော်ရွေစွာဆက်ဆံ နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Salary + Bonus + Other Allowance
Cashier -3Posts
- ပညာအရည်ချင်း- LCCI level1-2 - Cashier ပိုင်းလုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိဖူးသူဖြစ်ရမည်။
Chinese 47 Dim Sum, Restaurant & Bar
Cash Book တြင္စာရင္းေရးသြင္းႏိုင္ရမည္။ ေငြေကာက္ႏိုင္ရမည္။ အႏုတ္ စာရင္းကိုင္ႏိုင္ရမည္။ အဖွဲ့အစည်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: ကုမ္ပဏီမူဝါဒပေါ်မူတည်၍ အကျိုးကျေးဇူးများ ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
- ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံခြင်း၊ သေချာ၊ တိကျပြီး ဖောက်သည်ထံ ပြေစာတစ်ခုကို သေချာစွာ ထုတ်ပေးနိုင်ရမည်။ - နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနှင့် ဖြတ်ပိုင်းဖြတ်ပိုင်းများကို excel ဖြင့် မှတ်သားအသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - ပူးတွဲပါစာရွက်စာတမ်းဖြင့် ငွေပေးချေမှုနှင့် ပြေစာပမာဏအားလုံးကို စစ်ဆေးပြီးနောက် ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုများကို သေချာစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး တိကျသော ငွေသားလက်ကျန်ငွေနှင့် ငွေသားစာရင်းလက်ကျန်များကို ACA သို့ အစီရင်ခံရန် တာဝန်များ ကမ်းလှမ်းထားသော ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ၊ တန်ဖိုးများနှင့် ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန် ဌာနမန်နေဂျာများနှင့် ပူးတွဲအလုပ်လုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - လိုအပ်ချက်အရ Management မှ တာ၀န်ပေးလာသည့် အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို မဆိုင်းမတွ လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်
တင်သောနေ့: 29 Oct 2021
 တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။  စာရင်းအင်းကျွမ်းကျင်နားလည်ပြီး၊ Computer အခြေခံအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။  ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး၊အသင်းအဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။  နေ့/ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
- Petty Cash စာရင်းကိုင်နိုင်ရမည်။ - အသေးသုံး/ရုံးသုံးပိုက်ဆံများ စနစ်တကျထုတ်ပေးနိုင်ပြီး စာရင်းသွင်းနိုင်ရမည်။ - ငွေကောက်နိုင်ရမည်။ - ဘဏ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စများအားပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ - Cash Book တွင်စာရင်းရေးသွင်းနိုင်ရမည်။ - အဖွဲ့အစည်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Attendance Bonus Bus Charge Allowance Uniform
- Cashier လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁နှစ် အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည် - သွက်လက်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည် - အချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည် - အလုပ်အပေါ် အလေးအနက်ထားသူ၊ သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်
Recruiter active 14 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Great Victory Group of Company
- နေ့စဥ်ငွေပေးချေမှုနှင့် လက်ခံရရှိမှုများကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန္။ - လုပ်ငန်းအားလုံးအတွက် ငွေသားစာရွက်စာတမ်းများဖြည့်ရန္။ - လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ပေးသွင်းသူနှင့် ရုံးစရိတ်များကို ကြိုတင်ငွေပေးရန္။ - ဘဏ်နှင့် ဆက်ဆံခြင်း။ - နေ့စဥ် ငွေသားရေတွက်မှု တစ်နေ့တာ၏အဆုံး - Finance Manager မှ အတည်ပြုငွေပေးချေခြင်း။ - ဘဏ္ဍာရေးမန်နေဂျာထံ နေ့စဉ် ငွေသားစီးဆင်းမှု အစီရင်ခံစာတင္ရန္။
အကျိုးအမြတ်: - စွမ်းဆောင်ရည်လွန်မှုအတွက် ဆုလာဘ် - အလုပ်ချိန် : မနက် ၉း၀၀ မှ ညနေ ၅း၀၀ ထိ - တနင်္ဂနွေနှင့် Gazette အားလပ်ရက်များပိတ်သည်။ - အလုပ်တည်နေရာ - စမ်းချော
တင်သောနေ့: 26 Oct 2021
One Two One Delivery Service
- Cashier လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူများ ပိုဦးစားပေးမည် - စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
- Retail ဆိုင်များတွင် Cashier အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - Computer Basic အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Software အသုံးပြုဖူးဦးစားပေးမည်
တင်သောနေ့: 25 Oct 2021
Cash Book တြင္စာရင္းေရးသြင္းႏိုင္ရမည္။ ဘဏ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥမ်ားအားျပဳလုပ္ႏိုင္ရမည္။ အေသးသုံး/႐ုံးသုံးပိုက္ဆံမ်ား စနစ္တက်ထုတ္ေပးႏိုင္ၿပီး စာရင္းသြင္းႏိုင္ရမည္။ အႏုတ္ စာရင္းကိုင္ႏိုင္ရမည္။ ေငြေကာက္ႏိုင္ရမည္။
အကျိုးအမြတ်: * အပိုဆု + ကော်မရှင် * အစားအစာသို့မဟုတ်ခရီးသွားစရိတ်
တင်သောနေ့: 24 Oct 2021
E Service Mobile Services and Training Center
-POS software ဖြင့် cashier လုပ်ကိုင်ဖူးသူ - Computer (Microsoft word,excel)အသုံးပြုနိုင်သူ -Teamwork ဖြင့် ညီညွတ်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူ - အသက် ၂၂-၂၈ ကြားဖြစ်ရမည်။
တင်သောနေ့: 22 Oct 2021
Junior Accountant (Mdy Office)
Payment & Inventory ပိုင်းကို ပိုင်နိုင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် စိတ်ရှည် သည်းခံနိုင်ပြီး အဖွဲ့ စည်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်
Junior Accountant (Ygn Office)
1. ငွေကြေးပိုင်း ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ 2. စကားပြော ပြေပြစ်ရမည်။ 3. ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်။ 4. လုပ်ငန်းခွင်တွင်း လေ့လာသင်ယူမှု ကောင်းသူ ဖြစ်ရမည်။ 5. ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကောင်းသူ ဖြစ်ရမည်။ 5. ရိုးသား၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
LOC Recruitment Agency
Age- ( 19 မှ 25) အတွင်း -ပညာအရည်အချင်း- တဣသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မှစ၍လျှောက်ထားနိုင်သည်။ -လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ -Computer basic ရှိရမည်။ -နေစားငြိမ်းနေနိုင်ရမည်။
Maha Nyi Ahko Co.,Ltd
- Cashier ပိုင်း အတွေ့ကြုံရှိသူ ပိုဦးစားပေးမည် - ငွေကြေး control ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည် - အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်
- မည်သည့်ဘွဲ့ရမဆို။ - အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၃ နှစ်ရှိရမည်။